Qormo Xiiso BadanTuulada aan kasoo jeedo Ismaciil ali ismaciil | ogaden24
Qormo Xiiso BadanTuulada aan kasoo jeedo Ismaciil ali ismaciil
Laga soo billaabo sanadkii 1950-kii ilaa dhawr sano ka hor intaan hoos udhac ku imanin xoogagga wax’iska caabinta Soomaaligalbeed (wixii 1950-kii ka horreeyeyna warkeedba jooji) Tuulada aan kasoo jeedo marna Laguma arag qof rayid ah oo Itoobiyaan ah.
Dadka tuuladu waxay arki jireen oo kaliya Askar Itoobiyaan ah oo qoryaha keebka haysta; Askartaa afkooda mayna aqoon, magacyadooda mayna kari jirin, qawmiyadaha ama qabaa’ilka ay kasoo jeedaan mayna aqoon, gaalnimo sokadeed diin ay aaminsan-yihiin mayna aqoon, sidaa awgeed ismayna geyin oo gabdhahoodu kama hagoogan jirin (ragba uma qabin), garran iyo garowsho laysuguma iman jirin oo hadday ruux dilaan iyo hadday xilo-rag boobaan mag-dhaw iyo xaal-dhaqan midna lagama qaadan jirin; dacwad sharciyeed iyo garsoor dowladeedna warkoodba jooji.
Haddaan soo gaabiyo gabadha yar ee 4 jirka ah markay aragto askar Itoobiyaan ah intay guriga Hooyadeed ku cararto iyadoo sas’ qabta oo naftu dhuunta isugu timid, ayey ku odhan jirtay Hooyadeed: “Hooyo waata Axmaaradii, Hooyo waata Gaaladii, hooyo waa kuwan kuwii Adeero hebal dilay, hooyo waa kuwan kuwii abtigay ka kaxaystay”.
Meeshii noocaa ahayd maanta oo aan joogno waxaa ku nool qoysas Itoobiyaan ah oo qiyaas ahaan noqon kara 6 % dadka tuulada ku nool. Waa muwaadiniin degaan ah oo cidwalba ka dhiiran, qaarkood farsamada guryo dhiska ayey ku shaqaystaan, qaarkood waa macalimiin, qaarkood waa ganacsato yar-yar, qaarkood waa waxaan-la-aqoon qabtayaal.
Intaas markaan xog-ogaal ka ahay, uma baahni in la ii sharaxo sida ay Itoobiyaanimadu halis ugu tahay dadkayga, dalkayga iyo khayraadkiisa. ilaa hadda mahayno doorasho labaad aan ka ahayn inaan Itoobiyaanimada qoriga caaraddiisa ka hoos galno!, haddii aan qoriga dhigno ka ummad ahaan way na liqaysaa muddo 20 sano ka-yar.
Sidaa awgeed Nin Xafiis uu ka shaqeeyo ama xil uu qabtaa u muuqdo, iima sharaxikaro colaad iyo nabad middii halis badan. Waan Ogahay nooca halista ee labada maraxaladood iyo siday ukala heer-sarreeyaan.